Maharary ny herisetra any an-tsekoly - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fampianarana sy fanabeazana
Maharary ny herisetra any an-tsekoly
Ny Volana il y a 3 mois
Misy mpianatra iharan'ny herisetra any an-tsekoly. Indro tantaran'ny tovovavikely iray ifampizarana amintsika. Ahitantsika taratra fa mihanaka hatrany an-tsekoly ny herisetra. Fa misy koa ny lesona tsoahana ao, na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tompon'andraikitry ny sekoly na ho an'ny mpampianatra, izay tsipihina ety am-piandohana fa sady mpanabe na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny atao.
"Mahaliana no anarako. Mpianatra kilasy fahafito amin'ny sekoly tsy miankina iray aho. Efa hatramin'izay aho no nahazo ny laharana voalohany foana. Noho izany, dia manjary ialonan'ny mpiara-mianatra amiko aho. Misy ankizivavy iray no tena mitarika ny ankizy hafa tsy ho tia ahy. Satria tokony ho izy hono no voalohany kanefa voasongoko izy ka tezitra mankahala mafy ahy. Dia tarihiny ireo ankizivavy hafa rehetra tsy ho tia ahy. Dia manaraka tokoa. Rehefa miara-milalao dia tenenin-dry zareo aho hoe “tsy mahazo miara-milalao aminay fa tsy tinay”. Dia mipetraka irery aho rehefa fakan-drivotra. Malahelo aho ka manganohano foana. Dia toa izay foana isan'andro. Nanoratan'ireo ankizy ireo taratasy aho omaly. Milaza fa hoe tsy tianay rehetra indry. Dia nitomany aho namaky izany".
Toa izany no rivotra iainan'ity tovovavikely ity any an-tsekoly. Ary fanampin'izany raha ny fitantarany dia misy mpampianatra mpanavakavaka koa ao am-pianarana ao.
Olana anisan'ny mpitranga matetika ny toetra ratsin'ireo mpampianatra sasany. Tonga hatrany an-tsekoly ny fanavakavahana. Rehefa mahatolotolotra dia tian-dramatoa mpampianatra. Izay mamirapiratra fitafy koa akamany tsara, ka iangarany. Tsy zanak'olona manan-katao anefa i Mahaliana, ka tsy tian'ny mpampianatra sasany izy. Zanak'olona sahirana izy, saingy fianakaviana tia fianarana ka mikiry mampiana-janaka. Ary tena mahay tokoa ity zazavavikely ity, raha ny naoty azony tamin'ny fanadinana teo. Miharihary kosa anefa ary fantany ny toetran'ity mpampianatra taranja frantsay. "Rehefa izaho no manangan-tanana tsy tondroiny mihitsy, hoy izy. Hitako mihitsy fa tsy tiany aho. Na tokony hahazo naoty tsara aminy aza aho dia tsy omeny”. Manahirana ity resaka mpampianatra tsy mampitovy mpianatra ity, satria izay no anisan'ny nampiala an-daharana an'i Lesabotsy. Na zaza tokony ho tafita aza izy, dia nivily lalana hafa fa tsy namonjy sekoly intsony. Koa manaitra ny sain'ny mpanabe manoloana ny tranga fanavakavahana toa izao. Mety hoe tsy sahaza ny karama raisinareo mpampianatra ka mameno banga ny fanomezana isan-karazany azo. Misy manko ray aman-dreny, manome hatramina finday lafo vidy ka manjary miteraka trosa ao an-dohan'ny mpampianatra sasany ilay izy. Dia atao voalohany na jerena manokana ny zanaky ny mpanome.
Ray aman-dreny mahay
Rehefa mianatra ny mpianatra, dia aterina maraina ary tsenaina ny hariva. Any am-pianarana no andaniany ny tontolo androny. Mety tsy ho fantatry ny ray aman-dreny akory anefa ny manjo ny zanany, raha tsy misy fifampiresahana. Ka sarihina ny sain'ny olona rehetra manan-janaka mianatra mba hanao ho laharam-pahamehana io fifampiresahana io. Raha ny tantaran'ity tovovavikely ity ohatra, dia tena mampalahelo tokoa. Ka mety hampitatra ny sainy. Ilay mpianatra mpitarika fankahalana koa mety ho manana olana hafa mihitsy any an-tranony, ka mahatonga azy hisaina toa izany.
Santionana herisetra ity notantaraina ity. Raha tsy voavaha ny olana, dia miteraka olana hafa sy miverimberina. Anisan'ny mahatonga ny fifampialonana eo amin'ny samy mpianatra ohatra ity resaka laharana ity. Ka rehefa tena halalinina, inona tokoa moa no antony ampifaninanana ny mpianatra ho voalohany sy faharoa sy fahatelo? Tontolo ivelaran'ny zaza ny sekoly iray, ka tsy fahalalana fotsiny no rantoviny any fa fahaiza-miaina sy fahaizana mitondra tena haha olona tompon'andraikitra azy. Ka tsara hamafisina izay lafiny izay ho an'ny sekoly rehetra.